#GIS - ArcGIS Pro iyo QGIS 3 koorso - oo ku saabsan howlo isku mid ah - Geofumadas
Baro GIS adiga oo adeegsanaya labada barnaamijba, isla moodel xog ah
Koorsada QGIS waxaa asal ahaan lagu abuuray Isbaanish, iyadoo la raacayo casharro la mid ah kii koorsada caanka ah ee Ingiriisiga Baro ArcGIS Pro Easy! Waxaan u sameynay inaan muujino in waxaas oo dhan ay suurta gal tahay anagoo adeegsanayna barnaamij furan; had iyo jeer Isbaanish Kadib, qaar ka mid ah adeegsadayaasha Ingiriisiga ayaa na weydiiyay, waxaan u sameynay nooc koorso Ingiriis ah koorsada; Waana sababta uu QGIS-ka interface-ka kumbuyuutareedku ugu qoran yahay Isbaanish, laakiin codka oo dhami waa Ingiriis.
Koorsadan waxaad ku fidin kartaa manhajkaaga si aad u ogaato sida loo sameeyo isla hawsha adoo isticmaalaya ArcGIS Pro iyo QGIS.
-Import xogta miiska
-Ka dhoofi xogta CAD
-Muuqaalo muuqaal ah
-Waxbarashada iyo sumadaynta
-Diyaarashada qalabka iyo miisaska tafatirka
Koorsada waxaa ku jira macluumaadka agabka si loo soo dejiyo loona sameeyo shaqada guriga ee sida fiidiyowyada ah. Waxaa lagu soo saaray noocyadii ugu dambeeyay ee QGIS iyo ArcGIS Pro.
Post Previous«Previous #GIS - Nidaamyada Macluumaadka Juquraafiyeed ee leh QGIS
Post Next Sida loo kiciyo dhismayaasha 3D gudaha Google EarthNext »